ချီလီ - ကရိုးရိုးလစျြလြူရှုမည်သူမဆိုမချန်မထားနိုငျသောအံ့သြဖွယ်နိုင်ငံကဖြစ်ပါတယ်။ ချီလီအကြောင်းယင်း၏ဖော်ပြချက်အတွက်ယင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများစာရင်း, ထိုစကားလုံးက "အများဆုံး" ဖော်ပြရန်အတောမသတ်နိုင်ရကျိုးနပ်သည်တစ်ဦးတည်းသောများစွာသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ရပ်မှန်များကိုပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီတိုင်းပြည်ကမ္ဘာ့စံချိန်များဂင်းနစ်စာအုပ်ထဲသို့ပြုတ်ကျဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ချီလီ - တိုင်းပြည်အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ရပ်မှန်များ
ချီလီ၏နိုင်ငံခရီးသွားဧည့်များအတွက်သူမ၏အလွန်ဆွဲဆောင်မှုစေသည်ရာလျှို့ဝှက်ချက်များကိုအမျိုးမျိုးအတွက်ကြွယ်ဝနေသည်။ သငျသညျပိုကောင်းတိုင်းပြည်ရဲ့ features တွေကိုနားလည်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များစာရင်းပြုစုနိုင်သည်
ချီလီ - ကအန္တာတိတ်ကနေ 900 ကီလိုမီတာအကွာတွင်တည်ရှိသည်, ကမ္ဘာပေါ်တွင်တောင်ဘက်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ယင်း၏တည်နေရာ - ကတောင်အမေရိက၏တောင်ဘက်-အနောက်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပီရူး (အရှေ့ပိုင်း), (မြောက်ဘက်၌) ဖြစ်ပါသည်ဘိုလီးဗီးယားနှင့်အာဂျင်တီးနား - ချီလီနှင့်အတူနယ်စပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
ချီလီမြောင်ပြည်နယ်ဖြစ်တယ်, သူ့ရဲ့ width ကို 200 ကီလိုမီတာဦးရေအများဆုံးဖြစ်ပါသည်။ မြောက်မှတောင်သို့ချီလီရဲ့အရှည် 4000 ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။
ချီလီခုနှစ်တွင်လို့ခေါ်တဲ့သဲကန္တာရဖြစ်ပါတယ် သည့် Atacama ။ ဤအရပျကမ်ဘာပျေါမှာခြောက်သွေ့ဆုံးထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, အတိတ်လေးရာစုနှစ်မျှသိသာမိုးရေချိန်ရှိ၏။
ဒါ့အပြင်အဘယ်သူ၏အမြင့် 6071 မီတာကအမြင့်ဆုံးမီးတောင်တစ်ခုဖြစ်သည် Guallatiri မီးတောင်ရှိ၏။ သို့သော်တိုင်းပြည်ရဲ့အကြီးဆုံးအထွတ်အထိပ်တောင်တော် Ojos del Salado စဉ်းစားသည်, ကအာဂျင်တီးနားနှင့်အတူနယ်စပ်တွင်တည်ရှိသည်နှင့် 6893 မီတာအထိမြင့်တက်။
ချီလီ တာဂိုနီးယား ကမ္ဘာမြေ၏သန့်ရှင်းရာအရပ်ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားသည်, သူမပင်ယူနက်စကိုကဲ့သို့သောသော authoritative နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာရောက်လေ၏။ တာဂိုနီးယားမှာကောင်းကင်ပြာခဲအုံ့ဖြစ်ပြီး, ကြောင့်ဤအချက်ကိုမှချိုင့်၌ Valle က de Elqui ကို Southern hemisphere တွင်အကြီးဆုံးနက္ခတ္တဗေဒစောင့်ကြည့်လေ့လာတညျဆောကျခဲ့သညျ။
အယ်လ် Teniente - ချီလီခုနှစ်တွင်, ကြေးနီတူးဖော်အမြောက်အမြားအတွက်ဒီမှာကဒီသတ္တုများ၏ထုတ်ယူများအတွက်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးငါ့ဥစ္စာဖြစ်၏။ တိုင်းပြည်လည်းအမြင့်ဆုံးသောသက်ဆိုင်သောကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကြေးနီမိုင်း Chuquicamata ရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစက်ရုံများခရီးသွားဧည့်မှရရှိနိုင်ဖြစ်ကြပြီးမြောက်မြားစွာလေ့လာရေးအစီအစဉ်များတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။
ခြောကြောင့်ခွဲဝေချထားပေးရန်ရန်လိုအပ်ပါသည် အီစတာကျွန်း ကမ္ဘာပေါ်မှာအနီးဆုံးအခြေချကျွန်းကနေအများဆုံးဝေးကွာသော - ။
အတွင်းရာသီဥတု ချီလီ အလွန်ကွဲပြားခြားနားဖြစ်ပါတယ်နှင့်ထာဝရရေခဲမြစ်နှင့်နွေးထွေးသောသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေနှင့်အတူကျမဲ့သဲကန္တာရတောင်ထိပ်ပေါင်းစပ်။ ဒီတော့ဒီမှာသင်အရှိဆုံးပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့်ကွဲပြားခြားနားခံစားနိုငျ အားလပ်ရက် သမုဒ္ဒရာကမ်းခြေပေါ်အသုံးစရိတ်အချိန်နှင့်အဲဒီမှာကနေနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းမှဖြောင့် သွား. ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
- ချီလီကမ္ဘာ့သမုဒ္ဒရာ၏ကမ်းခြေပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးတစ်ခုတည်းသောနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုဖြစ်သည် အယ်လ် Mirador ။ ထို့ကြောင့်, အပေါ်တစ်ဦးအားလပ်ရက်ခံစားရန် ကမ်းခြေ အပန်းဖြေစခန်းဖို့, သာနာရီဝက်ကားတစ်စီးစီးနိုင်ပါတယ်။
ချီလီ၏ဌာနေကလူလူအမျိုးမျိုးတို့ကမ်ဘာပျေါတှငျအမြားဆုံးပုံမှန်မဟုတ်သော၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ ချီလီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီနယ်မြေကိုအိန္ဒိယလူဦးရေအတွက်မွေးရာပါအဆိုပါစရိုက်များအဖြစ်စပိန်ကိုလိုနီစုပ်ယူ။ အသွေးသည်ချီလီ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကမ္ဘာ၏နီးပါးသောလူမြိုး၏တိုး dilution "admixture" ကဖော်ပြသည်။ ယနေ့အဖြစ်, သငျသညျလူဦးရေအကြားတွင်ဥရောပနှင့် Slavic နိုင်ငံများမှရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတစ်ဦးကအလွန်ကြီးမားအရေအတွက်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါပေမဲ့ချီလီကအာဖရိကနိုင်ငံများနှင့်အရှေ့တောင်အာရှ၏နိုင်ငံတွေထဲကနေလူတွေဖြည့်ဆည်းဖို့လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတောင်အမေရိကမှပိုင်ထိုက်သောမဟုတ်ပါဘူး။
လူ့ကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တိရစ္ဆာန်များ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်, တိုင်းပြည်အတွင်းကြီးမားသောမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သျောလညျး, ချီလီ၏ပိုင်နက်တစ်လျှောက်လုံးအဆိပ်အပြင်းပင့်ကူ (Black Widow အပင့်ကူများနှင့်ဗီရို) ၏အတော်ကြာမျိုးစိတ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအအင်းဆက်ပိုးမွှားများ၏ကိုက်လူသားတစ်ဦးသေတတ်သောအန္တရာယ်သယ်ဆောင်။ Chula ပင့်ကူတိုင်းပြည်လူနေအိမ်အဆောက်အဦးများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်နေထိုင်ပါတယ်။
သို့သော်ချီလီအပေါငျးတို့သလျှို့ဝှက်ချက်များကိုမဟုတ်ပါဘူး။ ပူနွေးလအတွင်း, တချို့နိုင်ငံတွေမှာရေရှိသောကြောင့်ရေညှိ၏တစ်ဦးအထူးသဖြင့်မျိုးစိတ်များ၏ပေါက်ကွဲပြန့်ပွား၏ "အပွင့်" ကိုစတင်နေကြသည်။ ဤဖြစ်ရပ်သည် "အနီရောင်ဒီရေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု" ဟုခေါ်သည်။ အဆိုပါ blooming ရေထဲမှာရေကူးနှင့်ဤအချိန်တွင်ပင်လယ်စာနဲ့ငါးစားတင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်, ဤရေညှိအချို့လူသားတို့သေစေနိုင်သောဖြစ်သကဲ့သို့, ငါးနှင့်အသား, အစားအစာ၌သူတို့ကိုစားသုံးအင်အားအကောင်းဆုံးအာရုံကြောအေးဂျင့်အဆိပ် saxitoxin သို့မဟုတ် venerupin စုပ်ယူ။ ဒါကအလားအလာညစ်ညမ်းအဖြစ်ရေမဆိုအရင်းအမြစ်ကုသရပါမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရေသွားမသောက်ချက်ပြုတ်သို့မဟုတ်သန့်ရှင်းရေးအတွက်အသုံးပြုသည်ဆိုပါကပြုတ်ရပါမည်။ ငါးနှင့်အသားတိရိစ္ဆာန်များအပူကုသခံရဖို့လိုအပ်ရပါမည်။ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်တက်ကိုလျှော်လိုအပ်သောနှင့်ဝယ်ယူသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြစ်ပါသည်။ အသီး, ရေချိုးဖို့အပြင်, ကအစာစားခြင်းမပြုမီခွံရဲ့မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။
ပီရူးနှင့် ပတ်သက်. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်ရပ်မှန်များ
Iggy Pop ဂီတနှင့်ဒါဝိဒ် Bowie
ဘူလ်ဂေးရီးယား, ရွှေ Sands - ဆွဲဆောင်မှုများ
ဂျင်မ် Parsons နှင့် Todd Spivak လက်ထပ်